Sida loo wadaago sawiradaada Instagram adoo adeegsanaya xiriiriye | Androidsis
Haddii aad tahay qof si joogta ah u isticmaala shabakadaha bulshada oo aad isticmaasho in badan oo internetka ah, lagama yaabo inaadan haysan a Instagram Shabakadan bulshada, oo ay weheliso Facebook iyo Twitter, waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan, mana ahan wax aan jirin. Mid ka mid ah tirakoobyadii ugu dambeeyay ayaa muujinaya in ka badan 500 milyan oo isticmaaleyaal ah ay ku xirmaan bartaan maalin kasta.
Laakiin markan kama hadlayno shabakadda bulshada lafteeda, laakiin waxay ku saabsan tahay sida sawirada loogu wadaago xiriiriyeyaasha, wax fudud oo si fudud loogu samayn karo barnaamijka; Waxaan si faahfaahsan ugu sharxi doonnaa hoosta.
La wadaag sawirradaada 'Instagram' adoo adeegsanaya xiriiriye
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno si aan ula wadaagno sawirradayada 'Instagram' ayaa ah furitaanka barnaamijka oo taga boggayaga 'profile'. Si tan loo sameeyo, mar haddii ay furan tahay, dhagsii astaanta astaanta noo ah, oo ku taal dhinaca midig ee hoose ee shaashadda.
Ka dib markaad sameyso wixii la yiri, dhagsii sawir kasta oo aan dooneyno inaan nuqul ka dhigno isku xirka u dhigma ka dibna ku wadaagno sheeko ama qaab kale. Mar dambe, geeska bidix ee kore ee sawirka, saddexda qodob ee si toos ah isugu toosan, waa inaad riixdaa; tani waxay soo bandhigi doontaa daaqad ay kujiraan waxyaabo badan oo laga soo galo geeska hoose ee shaashadda; ikhtiyaarka na danaynaya ayaa ah Nuqul xiriirinta ah, taas oo ah halka aan gujin doonno, tanna waxaan ku tagi karnaa meel kasta oo aan ku dhejin karno xiriirka sawirka la xulay.
Nidaamkani ma khuseeyo oo keliya sawirradayada, laakiin sawirrada iyo sawirrada kootooyinka kale, maadaama aan sidoo kale ku wadaagi karno xiriiriyeyaasha.
Waxaad sidoo kale xiiseyn kartaa qodobbada casharrada soo socda ee Instagram:
Sida loo ogaado kan ka mid ah kuwa raacsan uusan ku raacin iyo kan kugula socda barta Instagram
Sida looga dhaqaajiyo habka mugdiga ah ee 'Instagram' barnaamijka
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Sida loo wadaago sawiradaada Instagram adoo adeegsanaya xiriiriye
HBO Max wuxuu si rasmi ah u imaan doonaa Spain qeybta labaad ee 2021